Wednesday November 18, 2020 - 13:33:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada Islamabad ee caasimadda Pakistan waxaa heshiis ku kala saxiixday hoggaamiyaasha muslimiinta ee dhigayay dibad baxyada ka dhanka ah Faransiiska iyo xukuumadda dabadhilifka ee uu madaxda ka yahay Camraan Khaan.
Qodobada heshiiska waxaa kamid ah in dowladda Pakisan ay cayriso safiirka Faransiiska taas bedelkeedna ay dadka dibad baxyada dhigaya ay joojiyaan iskusoo baxyadooda oo ay ka kala dareeraan fagaarayaasha iskusoo baxyada.
Safiir cayrintu waxay dhacaysaa sedax bilood gudahood ama laba bilood gudahood, sidoo kale qodobada lagu heshiiyay waxaa kamid ah in dowladda Pakistan aysan mar dambe safiir udirsan dhanka dalka Faransiiska islamarkaana ay mamnuuc ka dhigto badeecadaha uu soo saaro faransiiska kuwaas oo aan dalka Pakistan lasoo gelin doonin.
Xukuumadda Islamabad ayaa ogolaatay in ay u hoggaansato heshiiska ay lagashay hoggaamiyaasha muslimiinta waxayna xabsiyada kasii daysay tobanaan maxaabiis ah oo gacanta lagu dhigay intii ay dibad baxyada ballaaran ka socdeen gudaha wadankaasi.
Heshiiskan waxaa wada saxiixay Xarakada Labeyka Yaa Rasuulalllaah iyo xukuumadda Pakistan, arrimahan waxay yimideen kadib markii Axaddii lasoo dhaafay ay muslimiinta diinkooda uqiirooday lawareegeen fagaaraha iyo isgoyska Feyd Abaad ee dhaca bartamaha magaalada Islamabad arrinkaas oo sababay in uu istaago dhammaan dhaq dhaqaaqii ganacsi ee magaalada iyo isku socodka gaadiidka.
Ololaha lagu qaadacayo badeecadaha Faransiiska ee caalamka islaamka ka dhaqan galay ayaa sababay khasaaro balaayiin dollar ah oo gaaray shirkadaha ganacsiga waaweyn ee wadankaasi.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa aflagaadadii uu ugeystay Nabiga SCW waxay dhalisay in muslimiin badan ay hurdada kasoo hambaabiraan ayna ogaadaan xaqdiga ay gaaladu u qabaan islaamka iyo ehelkiisa